Anya nwere ihe nlele okwu | Martech Zone
Anya nwere okwupepe ede
Na Mọnde, Nọmba 11, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N’izu a ka m gụchara ihe Na-akwado Asụsụ Nne: Site na Olde Bekee ruo Email, Akụkọ Na-adịghị Agbanwe nke Nsụgharị Bekee by David Wolman kwuru.
O nwere ike ị gaghị ama ihe ederede na etymology bụ na ọ dị mma. Amaara m na m bụ onye na-egbu ụtọ asụsụ na mkpoputa, ma akwụkwọ a mere ka m nwee mmetụta nke ịka nka. Enwere ọtụtụ nde okwu n'asụsụ Bekee, mana nkezi ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị maara banyere 60,000. Nke bu eziokwu bu na otutu n’ime anyi amaghi ihe otutu okwu no n’asusu anyi!
Nke anyi bu asusu asusu adabaghi ​​adighi nso na asusu di nfe imuta. Fọdụ ndị folks kwenyere na idehie okwu bụ akara nke amaghị, mana Shakespeare n'onwe ya jiri okwu chepụta ma hiehie okwu dịka o siri daba. Ọ dị ka akwụkwọ ozi na okwu dị ka ụrọ nye ọkpụ ihe. Cheedị ma ọ bụrụ na m mebere onwe m okwu ọhụụ na blọgụ a, ndị mmadụ ga-eleda m anya (tupu m ahapụ).
Ka anyị na-abanye n’ime narị afọ iri ọhụrụ, anyị na-ahụ onwe anyị na-ekwu okwu gbasara nka na ụzụ nke nwere ike ọ gaghị ahụ onwe ha na akwụkwọ ọkọwa okwu edepụtara ọ bụla… yana ndị mbipụta akwụkwọ ọkọwa okwu enweghị ike ikwenye na ihe na-eme ya na ihe na-adịghị.
Ọ bụrụ na ị kwenyeghi na anyị na-echepụta okwu ọhụụ ka anyị na-aga, ọ dị gị mkpa ileghachi anya n'oge ka OK…. ma ọ bụ nke ahụ dịkwa mma… Ma ọ bụ nke ahụ bụ oll kwụrụ or ole kurreck. Chee echiche, ụmụ ụmụ gị nwere ike ịnwe akụkụ nke mkparịta ụka ha kwa ụbọchị, rofl, lmao, asap, lol, ttfn.
Ekwetaghị ya? Kedu maka okwu a Scuba, nke bụbu aha nnabata maka Ngwaọrụ Na-eku ume Onwe Gị. Kedu maka blog, nke na-erughị afọ iri gara aga Ihe ndekọ weebụ! Site na okwu biara blogger, blogged, blogging na blogware. Ọ bụ oge na-atọ ụtọ dị ka ọfụma n'ihi na ọtụtụ n'ime okwu, acronyms ma ọ bụ koodu dị mkpirikpi nke a na-eme n'ịntanetị taa ka eji zuru ụwa ọnụ.
Nakwa, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ka mgbasa ozi na ịzụ ahịa anaghị eso iwu nke ọdịnala. Anyị nwere ụlọ ọrụ dị ka Google, ihe dịka iPhone na ngwaahịa ndị dị ka Seesmic nke anabatara niile - mana anyị enwechaghị ndidi maka mperi na mberede na ọdịnaya nke anyị. Echere m na ọ na-adọrọ mmasị.
Daalụ ịdị mma anyị nwere ike ịdabere na ederede ederede!
Anya nwere ihe nlele okwu,
Ọ bụ ya na Osimiri Pea m.
Ọ bụ ụgbọelu lee akara anọ m revue
Miss Steaks M nwere ike eriri osimiri.
Anya na-apia ebe nile ma pinye okwu
Ma arọ anọ ya abụọ na-ekwu
Ihu ojo na ede ihe ojoo
Ọ na-agwa m ogologo.
Aga m agba gị ume iburu otu akwụkwọ, ọ bụ njem na-atọ ụtọ n'akụkọ ihe mere eme. David mere ka ọgụgụ akwụkwọ a dị mfe. Ọbụna ihe na-atọ ụtọ bụ na ọ na-akọ mmalite niile nke Bekee ka ya onwe ya, na-eleta ebe ha gbanwere. Ọ bụ a nnukwu ọgụgụ!
Tags: nchịkọta ọnụ ọgụgụnkeziAuditing ikaahịa profaịlụigwu dataolu isiokwuNgwuputaMobile na Mbadamba ụrọonline ịzụ ahịa personasndị mmadụ
Okwu ole ka akwụkwọ ozi kwuru ziri ezi?
Nov 12, 2008 na 11:01 AM
Bill Bryson si yiri nke ahụ na aha akwụkwọ mbụ bụ akwụkwọ ọzọ magburu onwe ya, ọ bụrụ na ị gbasaghị ụdị edemede Bryson na-enweghị atụ-atụba-eziokwu-na-gị. Agụbeghị m akwụkwọ Wolman, yabụ amaghị m ole gafere.
Nov 12, 2008 na 1:14 PM
Dan, enwere m ike ịlele nke ahụ. Otu n’ime akwụkwọ kacha amasị m n’afọ gara aga bụ Akwụkwọ dị mkpirikpi nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Bill Bryson!
Nov 15, 2008 na 4:53 PM
Ee, Short History bụ kpọmkwem ihe mere m ji bulie Asụsụ Oge m gafere ya.